Alahady 03 Oktobra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 4 octobre 2021 4 octobre 2021 par Hanitra ROBEL
ALAHADY FAHA XVIII MANARAKA NY TRINITE MASINA
FITONDRANA AM-BAVAKA NY MPITANDRINA RAHARIJAONA SOLOFONIRINA MIANAKAVY
“MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY”
Tamin’ny 9 ora maraina no nanomboka ny fotoam-bavaka. Mialoha izay dia nosokafana tamin’ny fomban’ny Fiangonana ny taom-pianarana vaovaon’ny Sekoly Alahady 2021-2022.
Ny Biraom-Piangonana no nandavorary ny fanatontosana ny fotoana. Rakotomanana Andrimbazotiana no nitarika izany. Ny Mpitandrina mpampianatra ao amin’ny Departemanta Misiôlôjia ao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga, Razafindrakoto Hasinarivo Andriambalohery, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.
Taorian’ny feon-javamaneno fanombohana dia noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira fanevan’ny faha 160 taona « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA, DIA IANAREO IZANY ».
Nisy fanolorana ny Mpitandrina hitory ny Teny.
Notononina ny fiarahabana apostolika.
Ny andinin-tSoratra Masina fiderana dia ao amin’ny SALAMO : 93 manao hoe : « Jehovah no Mpanjaka, mitafy voninahitra Izy ; Jehovah mitafy, eny misikina hery Izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin’ny fahagola ; hatrizay hatrizay Ianao. Manandra-peo ny riaka, Jehovah ô, eny manandra-peo ny riaka ; mampirohondrohona ny feony ny riaka. Mihoatra noho ny rano sady be no mahery, eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitr’i Jehovah any amin’ny avo. Ny teni-vavolombelonao dia marina indrindra ; fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô. Ny hira FFPM 171 : 1,2 « JESOA MPANJAKA MALAZA » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.
Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny JEREMIA 31 : 33 ; JAONA 15 : 16 ; JAONA : 54 ; HEBREO 9 : 15 manao hoe : “Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’Israely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ; ary izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko… Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny Anarako na inona na inona… Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany… Ary noho izany dia Mpanalalana amin’izay fanekena vaovao Izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin’ny fahotana natao tamin’ny fanekena voalohany, mba hahazoan’izay voaantso ny teny fikasana, dia ny lova mandrakizay”. Natao ny hira FFPM 288 : 1,2 “SAMBATRA IZAY VOAFIDY” dia nisy vavaka fifonana sy fibebahana. Nohiraina ny FF 15 : 2 “RAIKO Ô!”.
Ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana dia hoe : “Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko, ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko… Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao… Mainka fa ny ran’i Kristy, Izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an’Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny Fanahy mandrakizay, no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin’ny asa maty mba hanompoanareo an’Andriamanitra velona.” (JEREMIA 33 : 8 ; JAONA 3 ; 17 ; HEBREO 9 : 14). Nohiraina ny FFPM 488 : 3 “NA INONA NA INONA HITRANGA, JESOA”. Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (Lah.1). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha 8 Rakotonarivo Ravaka no nitarika izany.
Nisy tanora nandeha sambo, nisisika fa samy te hody kanefa tsy hahazaka ny rehetra ilay sambo. Nisy andro ratsy nony teny afovoany (rivotra, orana) ka vaky ny sambo ary niditra ny rano. Nisy tovolahy nitsambikina nilomano tany anaty rano dia maty, feno volamena ny paosiny. Namoy ny ainy noho ny halatra volamena izy.
Tsy fisehoana ivelany fa fiainana andavanandro ny fiarahana amin’i Kristy, fiombonana Aminy, hahazoana antoka ny fiainana mandrakizay, any amin’ny takona tsy hitan’ny olona.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : » Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy ?” MARKA 8: 36.
Nohirain’ny ankizy sy ny tanora ary ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 753 : 1 “TIAKO NY HIARAKA AMINAO, JESOA”. Nisy vavaka.
Razafimaharo Maminirina, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KORPNTIANA 3 : 17b. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka:
– Sabotsy sy alahady 9-10 oktobra any amin’ny Fitandremana FJKM Mahabo Fanantenana (afaka kelin’i Mahitsy miankavanana): fivoriambe sy ivon’ny faha 25 taonan’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana. Hikatona avokoa ny Fitandremana eo anivon’ny synodamparitany.
– Alahady 17 oktobra 2021 amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny Coliseum: fotoam-bavaka fametrahana ny olom-boafidy amin’ny taom-piasana 2021-2025. Hiditra amin’ny 7 ora sy 30 ny eto Amparibe.
– Talata 5 oktobra 2021 amin’ny 6 ora hariva : fivorian’ny komitin’ny fitsipika
– Sabotsy 9 oktobra 2021 amin’ny 12 ora sy 30 : fivorian’ny komitin’ny trano atsimo
– Sabotsy 9 oktobra 2021 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : fiofanan’ny tomponandraikitra andiany faharoa
– Alahady 10 oktobra 2021 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : fotoam-bavaky ny Katekomena hiarahany amin’ny ray aman-dreniny
– Sabotsy 16 oktobra 2021 amin’ny 8 ora maraina : fivorian’ny Mpihevidraharaha
– Sabotsy 23 oktobra 2021 amin’ny 8 ora maraina eny amin’ny Paul Minault : hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny Sampana Vokovoko Manga noho ny faha 30 taona
Alahady 24 oktobra 2021 amin’ny 7 ora sy sasany : fanombohan’ny fampianarana Sekoly Alahady
Nisy fanentanana nataon’ny mpitarika momba ny fiofanan’ny tomponandraikitra. Ny voakasika dia ny diakona, ny loholona, ny biraon’ny rafitra. Izay hiombona amin’ny SPAA10 ka handeha fiara dia manatona ny Vaomieran’ny Fifandraisana.
FIARAHABANA NY TERAKA VOLANA SEPTAMBRA
Natsangana ireo teraka volana septambra, noarahabaina sy nirariana soa. Ny Teny nomena azy ireo dia ao amin’ny DEOTONOROMIA 33 : 25b manao hoe : “Ary hifamatra amin’ny andronao ny fiadananao”. Nisy vavaka. Nandroso teo amin’ny alitara izy ireo nanao fanatitra. “MINO AHO” no hiran’ny Hasin’ny Famonjena nandritra izany, izay nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana. Nijoro teo amin’ny alitara ny Mpitandrina niarahaba azy ireo tsirairay isaky ny nandalo, tsy nisy fandraisan-tanana. Nisy Diakona nizara andinin-tSoratra Masina. 58 no isan’ny nankalaza ny tsingerintaonany tamin’ny volana septambra.
Ranaivoson Jacky no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SALAMO 96 : 7 izy. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : reraka, maniry fahasalamana sy fahombiazana eo amin’ny asa fivelomanana sy ny fiainan-tokantrano, nahazo tombonandro, naharay valim-bavaka, sitrana ny zanany, mangata-bavaka ho an’ny zatovo, ny hitantanana ny fiainany.
Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireo izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia : FFPM 460 : 1 “ARIO NY TAHOTRAO” ; FFPM 164 : 3 “JESOSY IRERY IHANY” ; Antema 16 “ISAORANAY JEHOVAH TOMPONAY”; “INONA NO ENTIKO” an’ny Hasin’ny Famonjena natao taorian’ny toriteny.
Ny hira vavaka FFPM 283 : 4 “MANAN-JARA, RY JESOSY” no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena.
Nohiraina ny FFPM 357 : 1, 2 “ EFA TONGA ATY IZAO ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Andriamasinoro Tantely. Ralaindimby Haja no namaky ny Testamenta Taloha raha Razafindrabe John Bam no namaky ny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ireto ny perikopa voalahatra : EKSODOSY 12 : 21-29 ; LIOKA 22 : 7-20 ; I KORINTIANA 11 : 23-34. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 208 : 1, 3 “ NY TENY MASINAO ”. Toriteny no nanaraka izany.
Nanombohan’ny Mpitory Teny ny fandraisam-pitenenany, mialoha ny hafatr’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana, ny fiarahabana apostolika sy ny fiarahabana ny Fiangonana noho ny faha 160 taona ary ny fiarahabana ny Mpitandrina mianakavy.
Omen’Andriamanitra antsika ny sitrapony araka ny LIOKA 22 : 7-20. Resahina ao ny fotoana nitaoman’i Paoly ho amin’ny Fanasana masina ho an’i Kristy tany Korinto.
Ny atao hoe Fiangonana dia fitambaran’ny manaiky ny famonjen’i Jesoa Kristy, ny vita batisa sy Mpandray. Ny Mpitandrina no fototra mampiroborobo sy mampiaina ny Fiangonana. Ny Fanasan’ny Tompo dia tsy fahazarana fotsiny ihany, ny alahadin’ny Mpitandrina koa, ny fankalazana noho faha 160 taona, fa fotoana fanamafisana fijoroana vavolombelona, fiombonana, fanamafisana ny nanaovan’i Jesoa ny Paska.
Mizara 3 ny hafatra :
1) Fotoana anamafisana ny fiaraha-miasa sy ny firaisankina
Ny Paska dia efa fanaon’ny Jiosy araka ny ao amin’ny Eksodosy. Eto koa te hanambara i Jesoa ny fiaraha-miasa : ny mpianatra, nahazo baiko, nilaza hoe :“ Aiza no tianao hanamboarana azy ? ” Fantany fa i Jesoa no mpitarika azy. Ny tanjona dia fiaraha-miasa teo amin’ny mpampiantrano. Eo amin’ny and.13 dia tanteraka ny Paska, ny fiombonana.
Ny alahadin’ny Mpitandrina dia fahatanterahan’ny fiombonana sy firaisan-kina eo anivon’ny Fiangonana. Isaorana an’Andriamanitra ny ananana azy. Ny hira fanevan’ny faha 160 taona eo amin’ny and.2 hoe: “ Velomy anatinay ny toe-po sy ny fanahy ” dia vavaka sy fiaraha-miasa. Tokony hentina am-bavaka ny Mpitandrina mba ho masina, tsy mitsitokotoko, sanatria tsy ho vasoka. Miainga amin’ny tenan’ny tsirairay io firaisankina io.
anamafisantsika fiaraha-miasa eo anivon’ny tokantrano koa izao mba hahita
fiadanana. Any amin’ny sampana miezaka isika. Tsy moramora izany satria misy
hevitra sy fari-pahaizana tsy mitovy, olombelona isika, mahay mampandefitra izany
no hisian’ny firaisankina.
2) Fotoana anehoantsika fa manana sy manaraka fandaminana isika
Tsy nisy ningonongonona fa nanatanteraka, eo amin’ny and.22 “makà hysopa”: nisahotaka ny zanak’Israely, voagejan’ny Egyptianina, fa nanaiky fandaminana satria Andriamanitry ny filaminana ny Andriamanitr’Israely. Matoa misy ny K160, ny alahadin’ny Mpitandrina dia hitazonana ny fanahin’ny fandaminana. Meteza hanana izany. Tena tempolin’Andriamanitra velona ireo mankatò, dia isika izany.
Zava-tsarotra no lalovan’ny Fiangonana manerana izao tontolo izao. Isaorana ny Tompo ho an’ny mpanompon’Andriamanitra tsy salama, nefa sitrana. Isaorana ny nahazakantsika ireny rehetra ireny. Hevitr’Andriamanitra apetrany eny anivon’ny Fiangonana izany. Ny OHABOLANA 20 : 18b milaza fa : « Ny fahaiza-mandamina tsara no entonao miady ». Homen’Andriamanitra ny Fanahiny anie isika mba hanana an’izany sy hitomboan’izany fandaminana izany. Ny an’ny Tompo no atao lohalaharana. Mety tsy mifanaraka amin’ny sitraponao ny fandaminany fa tsy maintsy miray hina Aminy isika. I Jesoa dia sahirana noho ny ady sarotra ka nanao hoe : « Ray ô esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no hatao fa ny Anao », midìka izany hoe aoka ny fandaminanao no hatao.
3) Fotoana anamafisana ny fifampizarana (ny fahasoavana sy ny mavesatra)
Eo amin’ny I KORINTIANA 11 : 33 dia misy hoe miangona, mihinana, mifampiandrasa, izany hoe mifampizarà. Mifampizara ny mavesatra, araka ny eo amin’ny and.15 « dieny mbola tsy mijaly aho ». Fahasoavana izany satria ambarany fa famonjena ny nanolorany tena.
Manana ny mavesatra aminy ny Mpitandrina : ivavaho izy hazahazaka izany rehetra izany ; afaka mizara aminareo izy, raha hanontaniana.
Mahereza fa mbola lavitra ny lalana. Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka antsika. Andeha hataontsika ho zava-dehibe amin’ny maha tempoly antsika izany rehetra izany. Izany hafatra izany dia mifandray indrindra amin’ny vinan’ny Fiangonana : mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana.
Feon-javamaneno fohy no nampanarahana ny toriteny. Nohirain’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ny “INONA NO ENTIKO?”, narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.
Ranaivoson Jacky no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy, noho ny Teny avy notoriana. Notononiny ny Mpitandrina nitory Teny, ka nentina amim-bavaka izy sy ny ankohonany ary ny asany. Nisy fisaorana noho ny fotoana androany izay tontosa. Ny toriteny anie hitoetra, hamakivakiana ny fiainan’ny Fiangonana. Tsy diso anjara ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy, ny asan’ny Fiangonana rehetra, ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ny komity mpikarakara, ny tomponandraikitra mba ho tontosa ny soritrasa ; ny sampana manao fankalazana amin’ity taona ity, ny firenena sy mpitondra isan’ambaratonga, mba hanjakan’ny fahamarinana sy handroso ; ny mpianakavin’ny finoana rehetra, ny tsy salama ho sitrana, ireo mijaly samy hahita fitia sy handray ny anjara masoandrony, ireo nanao voady sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.
Natao ny fiarahabana sy fitondrana amim-bavaka ny Mpitandrina mianakavy notarihin’ny Biraom-Piangonana izay teo amin’ny alitara. Ny solontenan’ny rafitra dia nijoro teo ivelany manodidina ny alitara.
Razafimaharo Mamy no nandray ny fitenenana. Mahatsiaro ny ezaka sy ny fitiavana nasehon’ny Raiamandreny ny Fiangonana, hoy izy.
Hanafy hery azy ireo anie ny Tompo, ny Fiangonana kosa vonona ny hifanohana hanatanteraka ny asa, hivavaka hahatontosa izany.
Ny Fiangonana dia efa hiomana amin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina ; hanangana komity, alohan’ny 24 oktobra 2021. Samy efa manomana solontenany avy ny rafitra.
Ireto no andinin-tSoratra Masina voatonona nandritra ny fandraisam-pitenenana :
I PETERA 4 : 13 « Fa araka ny iombonanareo fijaliana ao amin’i Kristy, dia mifalia, mba hiravoravoanareo indrindra amin’ny fisehoan’ny voninahiny koa »
DEOTORONOMIA 26 : 11 « Mifalia amin’ny soa rehetra izay nomen’i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao, ianao »
HEBREO 13 : 7 « Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny Tenin’Andriamanitra taminareo ; hevero ny hiafaran’ny fiainany, ka araho ny finoany »
Nasaina nitsangana ny Fiangonana. Ralaindimby Haja no nitarika ny vavaka. Nisy, hoy izy, ny fotoan-tsarotra, ny tsi-fahasalamana fa namoaka azy ho mpandresy, Andriamanitra. Ny ankohonana tsy tanteraka koa mangataka famelan-keloka sy fandiovana. Amin’ny fotoana mbola sitrak’Andriamanitra hiarahan’ny Fiangonana amin’izy ireo dia tononina ho azy ny fiadanana, fahasoavana, fitahiana mihoatra noho izay efa nomena azy tsirairay azy. Ny Fanahy Masina ho an’ny Mpitandrina mampiorina sy mampitombo ny finoan’ny Fiangonana, mitarika amin’ny asa tsara rehetra, mampiray ny mpianakavin’ny finoana mba ho tanteraka ny vina satria olom-boahosotra. Nentina amim-bavaka koa Ramatoa Bodo, ny zanaka, ny vinanto sy ny zafikely, izay miasa, mianatra, mitaiza, tezaina.
Rehefa izay dia niroso ny solontenan’ny rafitra avy, nanolotra ny fandraisan-tanana ho an’ ny Mpitandrina mivady. Izany dia tanaty feon-javamaneno.
Nandray fitenenana ny Mpitandrina. Niarahaba sy nisaotra ary nirary soa ny Mpitandrina nitory Teny izy. Nankasitraka ny Biraom-Piangonana sy ny ankohonany avy, ary ny rafitra rehetra, nahatomombana ny fotoana androany. “Hery ho anay ny manana anareo sy ny fanohananareo”, hoy izy. Nisaorana ny nanao ny vavaka. Izay manana anjara, tsy voatonona, hotahian’Andriamanitra. “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany”, izay no hafatra hamafisina, hiainana mandritra ny taona. Mazotoa, mahareta amin’ny fiainam-bavaka sy mankaty am-piangonana. Efa mihamaro isika fa afaka miombona; ho tonga maro foana isika tahaka ny fiainana teo aloha. Amafisina ny hafatra nomena androany, izany tokoa ny fankalazana : fanamafisana ny fiaraha-miasa ; fanehoana fa manamafy ny fandaminana isika ; fanehoana ny fijoroana vavolombelona amin’ny fizarana ny fahasoavana, miombom-pifaliana, mifampitondra izay mavesatra, mifanome tanana, mifampahery. “Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ” HEBREO 6: 10. Homba anareo anie ny Tompo. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Nitehaka ny Fiangonana. Namonjy ny toerany izy mianakavy.
Natao teo am-pitsanganana ny hira HF 31 : 1, 3 “ NY LALANAO JESOA”. Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotry ny Mpitandrina nitory Teny ny tsodrano. Noredonina ny hira vavaka HF 14 : “ ALELOIA ”. Nanao vavaka mangina sy nanonona ny Trinite Masina ny Fiangonana ary nofaranana tamin’ny feon-javamaneno izany.
Nifarana tamin’ny 11 ora sy 18 minitra ny fotoana.
Nanao fampahafantarana sy fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, mialoha ny niombonana latabatra tamin’ny Tompo.
Hitsidika ny toeram-panomanana Mpitandrina (TPM) any Fianarantsoa ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona, ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny, ny Fikambanan’ny Loholona sy ny Diakona. Nahafeno Mazda ny fanomezantsika farany. Raisina ao amin’ny mpandraharahan’ny Fiangonana ny fointsika Fiangonana hatolotra (akanjo, fitaovam-pianarana,…) hatramin’ny 14 oktobra 2021. Aorian’izay no handeha ny solontenantsika.
Rehefa izay dia nifantoka tamin’ny Fanasan’ ny Tompo ny Mpandray.
Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 262 : 1, 2 « INDRETO IZAHAY, RY JESOA Ô ! ». Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Natao ny vavaka izay narahana ny hira Antema 1 « MASINA, MASINA, MASINA ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 115 : 1 « JESOA TOMPO LEHIBE », dia natao ny vavaka hangatahana ny Fanahy Masina. Nasandratra ny kapoaka, novakiana ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy ny mofo ary ny Diakona lahy kosa ny kapoaka, tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 90 “ TSY HAIKO NY MILAZA RE ”; FFPM 107 “ MANIRY MAFY AHO ”. Nony voazara tamin’ny Mpandray ny mofo sy kapoaka dia ny Diakona indray ny notoloran’ny Mpitandrina izany. Niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka ny Fiangonana. Ny ampahan-kira 469 « MAMY RY JESOA NY FITIAVANAO » no natao. Natao ny vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra. Nandritra izany no nanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 543 “ MIHOBY NY FANAHIKO ”.
Fandaminana, fanentanana sy fampahatsiahivana no natao avy eo. Ny hafatra avy amin’ny Soratra Masina dia ao amin’ny I JAONA 5 : 11 hoe : « Ary izao no fanambarany : Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany. ». Natolotra ny tsodrano, ny hira farany dia HIRA FFPM 338 “ AROVY AHO, TOMPO ” nofaranana tamin’ny Amen.
Nanao ny vavaka mangina ny Fiangonana. Notononina ny Trinite Masina.
Nirava ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo tamin’ny 11 ora sy 55 minitra tao anaty feon-javamaneno.
Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno
Fanamafisam-peo : Ramahery Yves sy Randriamahefa Tina
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy sy Vaomieran’ny vola
Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra.
Article précédentPrécédent Alahady 26 Septambra 2021
Article suivantSuivant Alahady 17 Oktobra 2021